İzmir Qorshaha Saadka ee Magaalada oo La Diyaariyey | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirQorshaha Magaalada ee Izmir waara
05 / 12 / 2019 35 Izmir, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Qorshaha warshadeynta saadka ee magaalada oo la diyaariyey
Qorshaha Magaalada ee Izmir waara oo loo diyaariyay; Dawlada Hoose ee Magaalada Metrozmir waxay diyaarisay İzmir Qorshaynta Magaalooyinka Magaalooyinka (LOPtain) oo loogu talagalay samaynta rakaabka iyo xamuulka xamuulka ee magaalada iyadoo la raacayo heerarka Yurub iyo shuruudaha sayniska. Lopik, waxay ahayd logistics horeysay qorsheeyo diyaar by magaalo ku taal Turkiga.
Izmir degmada Metropolitan, diyaariso qorshe logistics in Turkey ay dawladdu ugu horeysay ee maxaliga ah. Barnaamijka diyaarinta muddada-bil ee 15, agaasimeyaasha iyo khubaro ka socota waaxyaha ay quseyso ee degmada, aqoonyahanno, saraakiil ka socota hay'adaha dowliga ah iyo ururada, saadka iyo shirkadaha kaydinta qabow, wakiillo ka socda waaxda gaarka loo leeyahay, degmooyinka degmada iyo ururrada aan dowliga ahayn.
Intii lagu guda jiray howsha diyaarinta, afar aqoon isweydaarsi iyo hal safar waxbarasho dibadeed ayaa sidoo kale la qabtay. Qorshaha Gaadiidka Master Turkey ee Qaranka, target Plan Logistics Turkey sharciga iyo waxbarashada kale ee la xiriira shaqada, istaraatijiyad, siyaasadda iyo baaritaan natiijada. Sidaas darteed, İzmir Sustainable Urban Logistics Plan (LOPI), oo la jaan qaadaya Qorshaha Gaadiidka İzmir, ayaa soo baxay.
Maxaa dhacaya marka ku xiga?
Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Dawladda Hoose ee Magaalada Eser Atak, isagoo sharraxaya muhiimadda LOPİ, wuxuu carrabka ku adkeeyay in ujeedka ugu dambeeya uu yahay in la yareeyo saamaynta xun ee bulshada iyo deegaanka ay ku yeelan karto howlaha logistics-ka magaalada iyo sidii loo horumarin lahaa xalalka. Hadda, hadafku waa in nolosha LOPI la soo dejiyo, ayuu yidhi Eser Atak. Qorshuhu wuxuu odorosaa xoojinta isku xirka gaadiidka, qorsheynta xarumaha logistics, abuurista aagag cusub oo gawaarida la dhigto. Miiska soo muuqan doona marka qaybaha la isku daro; Waxaan arki doonnaa in xamuulka xamuulka iyo rakaabku noqdaan kuwa si hufan oo hufan, ciriiriga taraafikada, sawaxanka, qiiqa qiiqa badan iyo waxyaabaha kale ee bey'ada xun ee ka soo baxa. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la dhimayo khidmadaha dhammaan deegaannadaas, waxaan qayb weyn ka qaadan doonnaa hodanka Qaranka. İzmir, inta aad mustaqbalka u lugeyso caafimaad; Dhaqan celinta saadka ee magaalada ayaa noqon doonta magaalooyinka ugu wanaagsan. ”
Maxaa iyo sidee loo diyaariyey LOPI?
Sharciga Dawladda Hoose ee Magaaladda No. 5216; gaadiid caafimaad qaba, gawaadhi xamuul ah oo xamuul ah iyo rakaab, sameynta xarumo waaweyn, gawaarida la dhigto, qorshooyinka dhismaha marka loo eego qorshayaasha, dekedaha, jidadka tareenka iyo xarumaha tareennada, jidadka waaweyn ee magaalada iyo dibedda, xarumaha kastamyada, xarumaha warshadaha iyo kaydinta, sida go'aaminta goobta howlaha ugu muhiimsan.
Si loo dhammaystiro hawshan oo dhan sida ugu saxsan uguna caafimaad badan, qorshaynta habboon waa lama huraan. Qaab dhismeedkaan, marka hore, xamuulka iyo rakaabka rakaabka ee İzmir waxaa laga qaaday raajo. Waxaa la go'aamiyay halka culeyska taraafikada uu kordhay, sababahee iyo goortahee waqtiga la qaadanayo. In kasta oo daraasadahaas lagu soo bandhigayo indho-indhayn iyo xogo tirakoob leh oo laga helay xarumaha iyo ururada la xiriira; sahan ayaa lagu sameeyay wakiilo ka socda qaybta saadka, daraasiin shirkado ganacsi, soosaarayaal magaalooyinka iyo miyigaba, ganacsatada chauffeer iyo muwaadiniinta. Dadka mustaqbalka, shaqada, awooda ganacsiga iyo saadaasha kobcitaanka gawaarida ayaa sidoo kale la diyaariyay.
Iyada oo laga duulayo arrimahaas oo dhan; İzmir Qorshaha Magaalooyinka Saadka Magaalada (LOPI), oo ay ku jiraan dhibaatooyinka iyo qorshayaasha xallinta iyo soo jeedinta mashruuca, ayaa soo baxay.
Maanta taariikhda: 13 Febraayo 1923 Barnaamijka Umur-u Nafia ayaa abuuray.
Xukunka masiibada ka dhacday magaalada waxaa loo diyaariyay: Maamulaha iyo makaanikada ilaa 6 sano…
Maanta oo Taariikh ah: Feebarwari 13, 1923 Barnaamijka Umur-u Nafiya wuxuu diyaariyay ururkiina qaran ...
Warbixinta Dabka Xerada Xerada Haydarpa Reporta Waxaa Diyaariyey
Qorshaha horumarinta nidaamka gaadiidka ee Antalya 20 sanadkiiba
Turkey Plan Logistics